ယူနိုကျတကျမှာ ဆိုးလျရှားရဲ့ အနာဂတျဟာ ဘယျလို ဖွဈနပွေီလဲ ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ #ဖာဒီနနျ - SPORTS MYANMAR
ယူနိုကျတကျမှာ ဆိုးလျရှားရဲ့ အနာဂတျဟာ ဘယျလို ဖွဈနပွေီလဲ ဆိုတာ ပွောကွားလိုကျတဲ့ #ဖာဒီနနျ
nicodeမနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီ ဘောလုံး ရာသီ အတှငျး ရလဒျ တှေ ဆကျတိုကျ ဆိုးရှား နေ ခဲ့တဲ့ အတှကျ နညျးပွ ဖွဈသူ အိုလီ ဂနျနား ဆိုးလျရှား ဟာ အသငျး မှာ ဆကျလကျ ရှိနေ နိုငျတော့ မလား ၊ ဆိုးလျရှား out ဆိုတဲ့ ပရိသတျ တှရေဲ့ အျောသံ တှကွေား သူဟာ ထုတျပယျ ခံလိုကျ ရ မလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး တှေ ထှကျပျေါ လာခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နောကျခံ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ရီယို ဖာဒီနနျ က ယူနိုကျတကျ မှာ ဆိုးလျရှား ရဲ့ အနအေထား တှကေ အန်တရာယျ အောကျ ကရြောကျ နတေယျ လို့ မယုံကွညျ ကွောငျး ၊ အသငျး ဟောငျး အနေ နဲ့ ဆိုးလျရှား ဖကျက ခိုငျမွဲစှာ ရပျတညျ ပေးနိုငျ ဖို့ လိုအပျ ကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ကလပျ အသငျး ဖကျက ဒါကို အလှယျတကူ ဖွတျသနျး နိုငျ လိမျ့မယျ လို့ တှေးတော သှား စရာ အကွောငျး မရှိ ပါဘူး ။ လကျရှိ အသငျး က အတှေ့ အကွုံ နညျးပါး လှတဲ့ အသငျး တဈသငျး ပါ ။ ဒါ့ကွောငျ့ လကျရှိ အနေ အထား တှကေ ဒီည ကုနျဆုံး သှားတာ နဲ့ ပွလေညျ အောငျ ဖွရှေငျး လို့ ရနိုငျ မယျ့ အရာ တဈခု လို့ တှေးတော နလေို့ မရနိုငျ ပါဘူး ”
” လကျရှိ အသငျး ကို ပွနျလညျ တညျဆောကျ နတေဲ့ ပုံစံ ကိုက အစပိုငျး မှာ နာကငျြမှု တှကေို ခံစား ရမှာ ပါပဲ ။ ဒီလို အခိုကျ အတနျ့ တှမှော ရလဒျ တှကေ ကြှနျတျော တို့တှေ ထငျမှတျ မြှျောလငျ့ နသေလို ဖွဈလာ နိုငျဖို့ မလှယျ ပါဘူး ။ အထူး သဖွငျ့ သူတို့ အခု ဖွညျ့တငျး ထားတဲ့ ကစားသမား အငျအား ၊ လူငယျ လေးတှေ နဲ့ မြှျောလငျ့ ထားသလို အကွီးကွီး တှေ ဖွဈ မလာ နိုငျ ပါဘူး ”
” ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျော တို့ အသငျး ကို လှယျကူ ရိုးရှငျးစှာ ခကျြခငျြး ပွောငျးလဲ ပဈလို့ မရ နိုငျဘူး လို့ ကြှနျတျော တှေးနေ ပါတယျ ။ အကယျလို့ ကြှနျတျော ဟာ မနကျ အိပျယာ နိုးတဲ့ အခြိနျ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ အနအေထား တှကေ ရုတျခညျြး ပွောငျးလဲ သှားပွီ လို့ သတငျးစာ (သို့) ဖုနျး app ထဲမှာ ဖတျလိုကျ ရမယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျော အရမျး အံ့သွ သှားမှာပါ ”
” သူတို့ တှကေ တဈကယျ့ ကို အရညျအသှေး ကောငျးမှနျ လှတဲ့ လူငယျ ကစားသမား လေးတှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားကွ ပါတယျ ။ ဒနျနီယယျ ဂြိမျးဈ ဟာ ဆိုရငျ ဒီ အသငျး မှာ အခု လောကျ မွနျမွနျ အသားကြ သှား လိမျ့မယျ လို့ ဘယျသူ မှ ထငျမှတျ ကွမှာ မဟုတျ ပါဘူး ။ သူဟာ အသငျး မှာ တဈကယျ့ ကို ကောငျးမှနျစှာ ကစား ပွနိုငျ ခဲ့ပွီး အသငျး အပျေါ လှမျးမိုး မှု ရှိနိုငျ တဲ့ ကစားသမား မြိုး ဖွဈလာ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ”
” လကျရှိ အသငျး ရဲ့ လူစာရငျး နဲ့ ပတျသကျ လို့ ဘာတှေ ပွောကွ ရမလဲ ? အကယျလို့ ခငျဗြား က ဆှမျဆီး လို အသငျး တဈသငျး ကနေ ကစားသမား တဈဦး ကို ချေါယူ လိုကျမယျ ဆိုရငျ သူဟာ ရရှေညျ အသငျး မှာ ခွစှေမျး ပွနိုငျ လိမျ့မယျ လို့ မြှျောလငျ့ နမှော ပါပဲ ။ အဲ့ဒီလို ကစားသမား တဈဦး က အရံ အနေ အထား မှာ ရှိနေ သငျ့တဲ့ အခြိနျ ပှဲထှကျ ကစားသမား စာရငျး ထဲကို အမွနျဆုံး ပါဝငျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ”
” လူတှေ ကတော့ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ လကျရှိ ဘယျ နရော မှာ ရှိနေ သလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျး ကိုပဲ အဓိက ထားပွီး ပွောကွ ပါ လိမျ့မယျ ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိ အနအေထား မှာ အခြိနျ ဟာ တဈကယျ ပဲ လိုအပျ တဲ့ အရာ တဈခု လို့ ကြှနျတျော ထငျ ပါတယျ ။ လကျရှိ အခြိနျ အသငျး ရဲ့ ကစားသမား တှဆေီ က အကွီးကွီး တှေ မြှျောလငျ့ ထားလို့ မဖွဈသေး ပါဘူး ”
” အုိုလီ ဟာ နောကျထပျ ကစားသမား တှကေို ပိုငျဆိုငျ နိုငျဖို့ အတှကျ အခွား အပွောငျး အရှေ့ ကာလ တှကေို လိုအပျ နပေါ သေးတယျ ။ အပွောငျး အလဲ တှေ လုပျဖို့ လိုအပျ နေ သေးပွီး ပို ကောငျးတဲ့ စှမျးဆောငျရညျ တှေ ထှကျပျေါ လာအောငျ လုပျဆောငျ ဖို့ လိုအပျ နပေါ သေးတယျ ။ အဲ့တာ တှေ ပွီးရငျ တော့ ခငျဗြား ဟာ သူနဲ့ ပတျသကျလို့ ဝဖေနျတာ ၊ ငွငျးခုံတာ တှကေို လုပျဆောငျ လို့ ရနိုငျ ပါပွီ ” လို့ ဖာဒီနနျ က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ယူနိုက်တက်မှာ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ဘယ်လို ဖြစ်နေပြီလဲ ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ #ဖာဒီနန်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီ ဘောလုံး ရာသီ အတွင်း ရလဒ် တွေ ဆက်တိုက် ဆိုးရွား နေ ခဲ့တဲ့ အတွက် နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား ဟာ အသင်း မှာ ဆက်လက် ရှိနေ နိုင်တော့ မလား ၊ ဆိုးလ်ရှား out ဆိုတဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အော်သံ တွေကြား သူဟာ ထုတ်ပယ် ခံလိုက် ရ မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တွေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နောက်ခံ ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ရီယို ဖာဒီနန် က ယူနိုက်တက် မှာ ဆိုးလ်ရှား ရဲ့ အနေအထား တွေက အန္တရာယ် အောက် ကျရောက် နေတယ် လို့ မယုံကြည် ကြောင်း ၊ အသင်း ဟောင်း အနေ နဲ့ ဆိုးလ်ရှား ဖက်က ခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည် ပေးနိုင် ဖို့ လိုအပ် ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ကလပ် အသင်း ဖက်က ဒါကို အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်း နိုင် လိမ့်မယ် လို့ တွေးတော သွား စရာ အကြောင်း မရှိ ပါဘူး ။ လက်ရှိ အသင်း က အတွေ့ အကြုံ နည်းပါး လှတဲ့ အသင်း တစ်သင်း ပါ ။ ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိ အနေ အထား တွေက ဒီည ကုန်ဆုံး သွားတာ နဲ့ ပြေလည် အောင် ဖြေရှင်း လို့ ရနိုင် မယ့် အရာ တစ်ခု လို့ တွေးတော နေလို့ မရနိုင် ပါဘူး ”
” လက်ရှိ အသင်း ကို ပြန်လည် တည်ဆောက် နေတဲ့ ပုံစံ ကိုက အစပိုင်း မှာ နာကျင်မှု တွေကို ခံစား ရမှာ ပါပဲ ။ ဒီလို အခိုက် အတန့် တွေမှာ ရလဒ် တွေက ကျွန်တော် တို့တွေ ထင်မှတ် မျှော်လင့် နေသလို ဖြစ်လာ နိုင်ဖို့ မလွယ် ပါဘူး ။ အထူး သဖြင့် သူတို့ အခု ဖြည့်တင်း ထားတဲ့ ကစားသမား အင်အား ၊ လူငယ် လေးတွေ နဲ့ မျှော်လင့် ထားသလို အကြီးကြီး တွေ ဖြစ် မလာ နိုင် ပါဘူး ”
” ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် တို့ အသင်း ကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းစွာ ချက်ချင်း ပြောင်းလဲ ပစ်လို့ မရ နိုင်ဘူး လို့ ကျွန်တော် တွေးနေ ပါတယ် ။ အကယ်လို့ ကျွန်တော် ဟာ မနက် အိပ်ယာ နိုးတဲ့ အချိန် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ အနေအထား တွေက ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲ သွားပြီ လို့ သတင်းစာ (သို့) ဖုန်း app ထဲမှာ ဖတ်လိုက် ရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် အရမ်း အံ့သြ သွားမှာပါ ”
” သူတို့ တွေက တစ်ကယ့် ကို အရည်အသွေး ကောင်းမွန် လှတဲ့ လူငယ် ကစားသမား လေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားကြ ပါတယ် ။ ဒန်နီယယ် ဂျိမ်းစ် ဟာ ဆိုရင် ဒီ အသင်း မှာ အခု လောက် မြန်မြန် အသားကျ သွား လိမ့်မယ် လို့ ဘယ်သူ မှ ထင်မှတ် ကြမှာ မဟုတ် ပါဘူး ။ သူဟာ အသင်း မှာ တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန်စွာ ကစား ပြနိုင် ခဲ့ပြီး အသင်း အပေါ် လွှမ်းမိုး မှု ရှိနိုင် တဲ့ ကစားသမား မျိုး ဖြစ်လာ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ”
” လက်ရှိ အသင်း ရဲ့ လူစာရင်း နဲ့ ပတ်သက် လို့ ဘာတွေ ပြောကြ ရမလဲ ? အကယ်လို့ ခင်ဗျား က ဆွမ်ဆီး လို အသင်း တစ်သင်း ကနေ ကစားသမား တစ်ဦး ကို ခေါ်ယူ လိုက်မယ် ဆိုရင် သူဟာ ရေရှည် အသင်း မှာ ခြေစွမ်း ပြနိုင် လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့် နေမှာ ပါပဲ ။ အဲ့ဒီလို ကစားသမား တစ်ဦး က အရံ အနေ အထား မှာ ရှိနေ သင့်တဲ့ အချိန် ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်း ထဲကို အမြန်ဆုံး ပါဝင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ”
” လူတွေ ကတော့ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ လက်ရှိ ဘယ် နေရာ မှာ ရှိနေ သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကိုပဲ အဓိက ထားပြီး ပြောကြ ပါ လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အနေအထား မှာ အချိန် ဟာ တစ်ကယ် ပဲ လိုအပ် တဲ့ အရာ တစ်ခု လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် အသင်း ရဲ့ ကစားသမား တွေဆီ က အကြီးကြီး တွေ မျှော်လင့် ထားလို့ မဖြစ်သေး ပါဘူး ”
” အုိုလီ ဟာ နောက်ထပ် ကစားသမား တွေကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့ အတွက် အခြား အပြောင်း အရွှေ့ ကာလ တွေကို လိုအပ် နေပါ သေးတယ် ။ အပြောင်း အလဲ တွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ် နေ သေးပြီး ပို ကောင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေ ထွက်ပေါ် လာအောင် လုပ်ဆောင် ဖို့ လိုအပ် နေပါ သေးတယ် ။ အဲ့တာ တွေ ပြီးရင် တော့ ခင်ဗျား ဟာ သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်တာ ၊ ငြင်းခုံတာ တွေကို လုပ်ဆောင် လို့ ရနိုင် ပါပြီ ” လို့ ဖာဒီနန် က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။